PBM dabeere dị iche iche akuku straws (ihe ubi straws, sub-obere fuelwood, achara, osisi scraps, wdg) dị ka isi akụrụngwa, na n'ikpeazụ na-aghọta na mbụ nnukwu ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu extrusion na China naanị n'okpuru okpomọkụ na shiee ọnọdụ.
2. Akụkụ nke ngwaahịa PBM:
(1) E nwere ọtụtụ ụdị ahịhịa dị, nnukwu oriri na oke itinye n'ọrụ
(2) A naghị eji gluu, ọ dịghị ihe mkpofu atọ a na-ahapụ n'oge usoro mmepụta
(3) Enwere ike ịhazi nha nha, nke na-ebelata mfu nke ihe nhazi na-esote ma na-echekwa ụgwọ ọrụ oge mmadụ.
(4) Ngwaahịa ahụ enweghị formaldehyde, mgbochi mmiri na ire ọkụ
(5) Recyclable, ghọta 3R isi imegharị ihe, belata ihe mkpofu siri ike na mmepụta na ndụ, arịa ụlọ, ịchọ mma na ihe mkpofu ihe owuwu.
(6) Ịba ụba nke osisi n'ime ọha mmadụ dum, na-enye nnukwu onyinye na nnọpụiche carbon
Ngosipụta Ngosipụta PVC Foam Core Free Foam Board Line
PVC ngosi mpempe akwụkwọ nwetara e ji mara mgbochi corrosion, mmiri-àmà, mildew-àmà, na-abụghị absorbent, drillable, sawable, planable, mfe thermoform, na-ekpo ọkụ ekwe nhazi, wdg, n'ihi ya, ọ na ọtụtụ-eji na ngwá ụlọ, cabinets, bath. cabinets, ngosi shelf mbadamba, igbe isi n'ígwé , Ime ụlọ na n'èzí mma, ihe ụlọ, chemical ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ubi, mgbasa ozi ihe ịrịba ama, obibi, silk ihuenyo, inkjet, kọmputa leta, electronic ngwá ngwaahịa nkwakọ na ndị ọzọ na ọrụ.
Nkọwa ngwaahịa 1220*2440mm, 1560*3050mm, 2050*3050mm
Ọkpụrụkpụ ngwaahịa 1-33mm
Njupụta ngwaahịa 0.35-0.8g/cm3
Ọsọ ahịrị mmepụta: 2-4m/min.
moto ike 75kw -90kw
Agba: dị iche iche
Nke a akara nwere ike rụpụta PVC Board na obosara si 900 -1220mm, ọkpụrụkpụ: 12-25mm
Nke a na-ejikarị dị ka bọọdụ mkpuchi ihe na ụlọ ọrụ ihe owuwu.
Atụmatụ na uru nke PVC ụlọ template: 1. The akụrụngwa nke PVC ụlọ template bụ PVC SG5, osisi bụ B1 ire ere retardant, onwe-enyụọ na ikpe nke ọkụ, elu okpomọkụ iguzogide, na ewu ewu na-mma.Ụdị ụdị ọhụrụ nke na-edochi template ígwè na plywood bamboo-wood, nwere ihe ndị na-eme ka mmiri na-ekpuchi mmiri, ihe mgbochi mildew, na-eguzogide corrosion, na nke na-adịghị.2. Simenti na-adịghị mma, dị mfe ịmegharị mgbe e wuchara ya, enweghị nrụrụ.3. Ịrụ ọrụ nke ọma dị elu, àgwà dị mma, elu nke ụlọ ahụ e ji rụọ ya na-adị mma ma dị larịị, mmetụta na-akpụ akpụ na-agbapụta dị mma, ọ dịghịkwa mgbanwe nke abụọ dị mkpa.4. Oge ntụgharị ntụgharị nwere ike iru ihe karịrị ugboro 50, ogologo ndụ ọrụ, arụ ọrụ nrụpụta ka mma, nchekwa dị mma, njem na ihe owuwu.5. Enwere ike ịkụpịa template mkpofu ma megharịa ya maka mmepụta na itinye n'ọrụ na uru ndị ọzọ, na-echekwa ihe onwunwe na izute ihe ndị a chọrọ nke "ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ".6. Mpempe ụlọ nke pVC nwere njirimara nke mkpuchi ụda, ụda ụda, mkpuchi okpomọkụ, nchekwa ọkụ, wdg, ma nwee mmetụta dị mma na-adịghị mma.7. Usoro nke ịgbakwunye osisi nwere ike iji mee ihe maka ọgwụgwọ dị iche iche, nke a na-edozi dị ka osisi dị ka ịkụ osisi, ịcha, ntu, planing, sticking, wdg. Enwere ike ijikọ ya na ihe ndị ọzọ PVC dị ka usoro izugbe si dị, ya mere ọ nwere ike ịbụ. na-agbanwe na saịtị ihe owuwu Iji mee nhazi nke abụọ.
Osisi ụfụfụ PVC / WPC ugbu a na-aghọ otu ụdị ihe mara mma nke a na-ejikarị na ngwa osisi.Site na ịrụ ọrụ dị mma na uru, ọ na-adọrọ mmasị, ejiji, ihe na-adịgide adịgide na nke mara mma maka ịchọ mma ụlọ.The mmepụta akara na-emi esịnede pụrụ iche ejima-ịghasa extruder, extrusion anwụ, vetikal atọ rola na inyeaka igwe.Ụlọ ọrụ anyị na-enye usoro na teknụzụ zuru oke.The dum mmepụta akara nwere àgwà nke nnukwu mmepụta, anụ extrusio ...
Osisi-plastic osisi bụ ụdị osisi (osisi cellulose, osisi cellulose) dị ka isi ihe, thermoplastic polymer ihe (plastic) na nhazi ihe enyemaka, wdg, agwakọta uniformly, na mgbe ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ na extruded site ebu ngwá.Ihe eji achọ mma dị elu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi, nke nwere ma arụmọrụ na njirimara osisi na plastik, bụ ihe ọhụrụ mejupụtara nke nwere ike dochie osisi na plastik.1. Waterproof: mothpr...